Semalt: Kunzwisisa Nei Chinyorwa Zvakakosha MuSEO
Zvese kuburikidza newebhusaiti yedu, iwe uchasvika pakuziva zvakawanda nezve SEOs, asi pano, tichave tichitaura pamusoro pekuti nei zvemukati zvichikosha kune SEOs. Parizvino, iwe unofanirwa kunge uchiziva zvinoreva SEO, asi kana usinga, isu tine chikamu chakatsaurwa kune icho .
Asi zvakadaro heino kuongorora. Isu tinowana Injini Yekutsvaga nekugadzirisa mamwe mazwi makuru mune zviri pane yako saiti. Pane zvawakaona here? Kana iwe usina kuita, ngatitaridze yako kune iyo. SEO inogona kuwanikwa chete nekubatanidzwa kwezvakanyorwa-zvakanyatsonaka zvinyorwa uye kushandiswa kwayo kwemashoko akakosha. Pasina hukama pakati peaya maviri, hakuzove neSEO.
Zviri mukati ndizvo zvinhu zvese zvakanyorwa pane webhusaiti yako. Izvi zvinosanganisira peji rako rekutora, iro remba peji, nezvedu peji, uye zvimwe zvese zvaunoisa pane yako webhusaiti. Nguva zhinji, vanhu vanongonzwa kuti vanogona kuisa mazwi akakosha chero kupi asi kwete timu yedu. Isu tinotenda mazwi akakosha anofanirwa kushandiswa nenzira yakanakisa, kwete kungodzidzisa vaverengi vako asi kuti uite pfungwa yakakwana uchiita zvakadaro.
Zvemukati mako ndizvo zvakakosha pakugadzira kutengesa. Sezvo isu tatsanangura, ma SEO akakosha pakuwana traffic kune yako saiti. Asi kuita kuti vanhu vaone zvigadzirwa zvako hazvisi kuzokuita hupfumi. Unoda ivo vashanyi kuti vatendeukire kune vatengi vanoraira zvigadzirwa kana masevhisi aunorayira. Apa ndipo panopinda zvinhu. Vanotsanangudza vashanyi vako zvaunogona kuvaitira. Ivo vanotsanangura, vanodzidzisa, uye vanogonesa vaverengi vako. Saka, iwe unoda kuti zviri mukati mako zvive zvese SEO zvakagadziridzwa uye zvakanyorwa naSemalt nyanzvi.
Pasina zvemukati, vaverengi vako vacharasikirwa vasina mepu kana bhuku rekuraira.
Fungidzira iwe uchienda kunzvimbo yekudyira iyo yainzi nyeredzi shanu, asi iwe unopihwa dhiziri pakutanga, ipapo iyo appetizer pamberi peiyo huru ndiro. Izvo zvaisazokupa iwe 5-nyeredzi ruzivo, ungadaro? Izvi zvinoratidza kuti kuziva SEO hakuna kukwana; iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuronga kwavo, vashandise zvine basa mune ako webhusaiti. Uye nzira chete yekuita izvozvo ndeyekunyora zvine musoro zvirimo.
Kuti ushandise mazwi makuru, iwe unoda timu sevane tarenda uye yakazvipira seyedu kuisa mazwi akakodzera mune yakarongeka. Harisi basa riri nyore, uye haufanirwe kuripa chero munhu.
Unyanzvi hwekunyora husina kunaka pamwe neese akakosha mazwi achaita kuti vanhu vashanyire saiti yako. Asi kana vangoverenga zvirimo, vanozvinyora nekuda kwekunge iwe wakashandisa mazwi ekunyora asi nenzira isiriyo.
Chii Chinoita Kuti Zviri Mukati Zvikoshe MuSEO
Chikwata chedu chinotarisa pamusoro pekuumbwa kwezvinhu zvirimo, giramaimari, toni, uye kugona kwemuverengi kuenderana nezvako zvigadzirwa nemasevhisi. Nevanyori vedu zvemukati, iwe unobatsira kunyora kwekugadzira uye kugona kunyora pamwe chete neruzivo rwakakura rwemazwi akakosha uye nzira yakanaka yekuishandisa.
Keyword research: kukupa iwe huwandu huwandu hweanodzvanya, tinofanirwa kuziva izvo vateereri vako vanotarisisa. Iko hakuna kiyi yakasarudzika kiyi yezvinhu zvese. Uye iwe hausi imwe webhusaiti. Kuti tikupe kurapa kwakanyanya, tinotsvaga akakosha anoshandiswa mazwi ane zvigadzirwa zvako.
Isu tinotarisa nzira dzakagadzwa zera mapoka achatsvaga chako chigadzirwa kana masevhisi.
Kusunganidzwa kwemazwi kwakasiyana papi nenzvimbo
Uye kuti vashandisi vanotsvaga sei zvichienderana nekunzwisisa kwavo kwezvavanoda.
Tinofungidzira kuti iwe hauna kuziva zvinhu izvi zvese zvine basa. Ichi ndicho chikonzero iwe uchida iyo inotonhorera Semalt yezvinyorwa zvekunyora timu pane yako projekiti. Isu tinofunga zvakasiyana siyana seizvi uye tinosanganisira akawanda emazwi makuru mune yako yewebhu zvemukati. Nenzira iyi, webhusaiti yako inoonekwa zvisinei nekuti vashandisi vanotsvaga sei paGoogle. Iwe unoonekwa, uye kana vangodzvanya, vanobatwa. Zvemukati medzedu zvakanakisa iwe usasimudze maziso ako kusvikira wapedza kuverenga.
Usaedze kutiratidza kuti takanganisa panguva ino. Enderera kuverenga; pane zvakawanda zvakawandisa zvatinofanira kukuudza.
Zvimiro zve SEO Zvemukati
Kusiyana: kazhinji, tinoverenga zvinyorwa paInternet, uye zvinoita kunge zvisinganzwisisike kujaira. Mushure mechinguva chekufungisisa, isu tinorangarira kuverenga chimwe chinhu chakafanana kana chirevo chaicho. Tinogona kusazvitaura, asi tinogumbuka nekuti isu tinoda chimwe chinhu chitsva, chakasiyana. Iye zvino, funga nezvekunyorera sevhisi kana tsanangudzo dzekugadzira dzakafanana chaizvo nemakwikwi. Hatifunge kuti pane imwe nzira iri nani yekushambadza makwikwi ako.
Nezvinhu zvakasarudzika, Semalt anonongedza zvemukati zvakasarudzika kune webhusaiti yako wega. Kana timu yedu ikanyora, iwe unoona yako brand yakanyorwa zvese pamusoro payo. Iwe unonzwa kubatana nezviri mukati uye nechigadzirwa / masevhisi aunopa.
Izvi zvinoita kuti vashandisi vako vazive kuti wakafanana nemakwikwi ako, iwe wakasiyana, wakasarudzika, uye isu tese tinoda akasiyana nevamwe. Vazhinji vevatengi vedu vanoshamisika kana isu tikatsanangura kuti zvakasarudzika zvirimo zvakakwana kuti vachengetedze vatengi vavo.
Mifananidzo: Isu tese tinoda mifananidzo uye inonamira zviri nani mundangariro dzedu. Hazvishamisi kuti mafoni mazhinji nhasi anoedza kuvandudza iwo macamera emafoni emafoni avo. Izvi zvinodaro nekuti munhu wese anoda kuona zvinhu zvakanaka nenzvimbo. Pane ichi chinoshamisa kunzwa chinouya nacho. Izvi zvinondiyeuchidza kuti nei takadzidza kuverenga sevana vane mifananidzo. Mufananidzo unongowedzera hupenyu kune zvese zvatinoita. Yedu yezvinyorwa ine akasiyana mafomu emifananidzo. Tine musanganiswa wemifananidzo, madhiramu, uye mifananidzo. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti muverengi averenge kuburikidza asina kunzwa kubhowekana. Kune vasinga farire kuverenga, chinhu chekutanga chavanoita kana vatakura chero bhuku ndere kutarisa mifananidzo. Kana vangoona dzimwe dzinonakidza, ivo vanonzwa kuda kurava. Chinhu chimwe chete ichocho chinoshanda kune zvemukati zvewebhu. Mifananidzo, mifananidzo, uye dhidhiya zvinotora pfungwa dzemuverengi.
Izvo zvinobatsirawo ivo kuyeuka mawebhusaiti ako nekukurumidza. Nguva zhinji patino kanganwa zita rekero, tinorangarira zvimiro zvakatenderedza uye toshandisa izvo kuti tirangarire kero. Saka kana muverengi achiedza kurangarira masevhisi ako kana zvigadzirwa, hazvitore nguva yakareba, zvese nekuda kwemifananidzo yatinowedzera kune rako rewebhu zvemukati.
Saiti mamiriro: zvatinonyora hazvisi izvo zvine basa. Kutaridzika kwainoita kunoita nzira refu pakuziva kuti vashanyi vanoverenga here kana kuti kwete. Chimiro chakakosha nekuda kwezvikonzero zviviri zvakakosha. Iyo yakanaka saiti dhizaini inobatsira Google kuwana yako webhusaiti nekukurumidza: chinangwa ndechekunyora muzvivakwa zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kuGoogle kuwana zviratidzo. Chimiro chemukati mune yako saiti ndicho chinosarudza kana injini yekutsvaga inonzwisisa nekukurumidza kuti saiti yako ndeyei uye kuti nyore sei yainowana izvo zvine chekuita nezvakatsvaga.
Nekugadzira zvinyorwa mumhando yakakodzera, unogona kukwezva zvinongedzo kubva kune vamwe kubatsira peji rako zvakare. Kune bhizinesi rakaita senge rako, izvi zvinoreva kuti unogona kushandisa SEO zvemukati kukurudzira injini dzekutsvaga peji rako rekutengesa. Chimiro chakanaka chinoita kuti kuverenga kuve nyore.
Webhusaiti yako inogona kunge yakagadzirwa nemapeji akati wandei, uye yega yega inotakura nezvayo zvakasiyana nezvayo. Iwe haudi kuti vaverengi vako vaone mapeji ako ewebhu akaita seyavha kana inoteedzana nemanyorero. Ichi chikonzero nei tichigadzira dhizaini yayo. Isu tinochengeta zvirimo zvako zvipfupi, zviri nyore kuverenga, uye zvine ruzivo.
Nguva zhinji, hatishanyire webhusaiti ewebhusaiti kuti uverenge kwemaawa. Isu tinongoda ruzivo rwakakwana kuti titarise kuti izvo zviri kupihwa ndizvo zvatiri kuda. Saka, zvirimo zvedu zvinozivisa vaverengi vako kuti vazive zvavari kutenga, asi chengetedze zvakapfupi uye zviri nyore sezvazvinogona. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwavari kuti vatenge uye kubhadhara vasina kuvhiringidzika mukati mekuverenga.
Ngatiti iwe unoda kutenga chosasa, uye iwe unoverenga tsananguro, asi panzvimbo yezvirimo kutsanangura maitikiro azvo, zvakanakira, iri kutsanangura nhoroondo yevanosasa. Vaverengi vazhinji vanozodzosera zvakapetwa kuti vawane mumwe muparidzi.
Chimiro chedu chinowana ruzivo rwakanyanya kumuverengi, kutanga kukuchengetedza iwe kutengesa.
Modified: Pamasaiti ekare, tinobvisa zvirimo zvekare uye tozvitsiva nezvitsva. Nenzira iyi, vashanyi vako vanovandudzwa pamasevhisi ako azvino, kana zvinhu zvitsva zvawakawedzera kune zvanga zviripo. Kana zvirimo zvapera, tinozvitsiva nezvakanaka uye zvimwe zvichangoburwa. Vashanyi vanokwanisa zvakare kuona masevhisi amunopa izvozvi kwete ekunze. Isu tinotenda kuti kuchenjera kuti uchinje zvemukati zvewebhu kamwechete mune imwe nguva. Nenzira iyi, kunyangwe vashanyi vako vakuru vachazove nechimwe chinhu chitsva chekutarisira pavanoshanya.
Chikwata chemuSemalt chakagadzirwa nevanyori vakanyatsogona vanosangana nezvose zvaunoda. Kusiyana nevamwe vanyori, timu yedu inokurukura newe kutanga. Nenzira iyi, ivo havangonyore zvinyorwa zvewebhu, asi vanonyora zvemukati zvinogovera mazano ako, zvinangwa, uye zviratidzo. Nenzira iyi, iwe unonzwa kubatana kune yako webhusaiti, uye kana vatengi vako kana vashanyi vakakubvunza iwe chaiyo mibvunzo, iwe unogona nyore kupindura. Zvesekutenda kune yedu inoshamisa Semalt yezvinyorwa kunyora timu, isu tichafumisa iwe.